Iindaba -Ukwahlula njani ipeyinti kumnyango wasimahla, ucango lwendalo, ucango oluqinileyo lomthi, ucango oluqinileyo lomthi kunye nomnyango wokuqala wokhuni?
Uzahlula njani ipeyinti kumnyango wasimahla, ucango lwendalo, ucango oluqinileyo lomthi, umnyango oqinileyo opeyintiweyo kunye nomnyango wokuqala wokhuni?
Umnyango womthi ekhaya, kufuneka ubambe indawo ebalulekileyo. Umgangatho womnyango womthi, uhlobo, isitayile, uphawu kunye nokunye, zonke kufuneka ziqwalaselwe xa ukhetha umnyango wokhuni. Ngokweentlobo, kukho iminyango yasimahla ye-lacquer, iingcango zendalo, iingcango zomthi eziqinileyo, iingcango zomthi oqinileyo, iingcango zomthi woqobo njalo njalo, akukho lula ukwahlulahlula.
Into ebizwa ngokuba yipeyinti yasimahla ziingcango ezingadingi kupeyinta, umphezulu awunapeyinti, uninzi lusebenzisa izitikha zePVC ezinombala oqaqambileyo kunye nesitayile esityebileyo sokuhombisa. Izinto eziphambili yibhodi yoxinano ekulula ukuyifunxa amanzi kunye nokudumba. Ngapha koko, umphezulu wePVC kulula ukuwadala kwaye uvulekile, kwaye umxholo we-formaldehyde nawo uphezulu.
Olu hlobo lwesakhiwo seminyango lusebenzisa imveliso yokufa eyahlukileyo ukuze kuphunyezwe ukungabinamthungo, ukutywina kunye nokugquma kwesandi. Umphezulu weenkozo zomthi ucacile kwaye ucwecwe, umbala mhle, kwaye akukho lula ukuwa kwaye utshintshe umbala elangeni. Kukho ipleyiti yesinyithi engeniswa elizweni, ibhodi ye-polymeri yendalo, iplanga yokuhombisa engenisiweyo, isikhumba njalo njalo. Ngaphezu koko, ukusebenza kwe-substrate kuzinzile, akukho kuqhekeka, akukho deformation, kwaye kungcono kwindalo esingqongileyo.
Xa umnyango wendalo untywiliselwa emanzini ixesha elide, kulula ukuba ukhubazeke, uqhekeke kwaye ucime. Xa uyisebenzisa, kuya kufuneka unike ingqalelo ukuthintela ukubetha okuqinileyo komphezulu wengcango kunye negqabi lomnyango.
Umnyango odibeneyo wokhuni:
Isiseko saso somthi senziwe kakhulu ngompayini, umthi waseTshayina okanye izinto zokuzaliswa ezingeniswa elizweni. Igqunywe ngebhodi yoxinano kunye neplanga eqinileyo yomthi. Yenziwe ngokucinezela kushushu kubushushu obuphezulu kwaye itywinwe ngemigca eqinileyo yomthi. Ukuthetha ngokubanzi kwinqanaba eliphezulu leenkuni zomgangatho oqinileyo womthi ubukhulu becala kukumhlophe okumhlophe. Ipine emhlophe inobuninzi obuphantsi, ubunzima bokukhanya, kwaye kulula ukulawula umxholo wokufuma, ke iingcango zomthi ezigqityiweyo zilula ngokuthe kratya, kananjalo akukho lula ukuzigqwetha nokuqhekeka.
Ewe, umnyango oqinileyo womthi nawo uneempawu zokulondolozwa kobushushu, ukumelana nefuthe kunye nokudodobala kwelangatye, kunye nefuthe lokugquma isandi ngokusisiseko liyafana nelo lomnyango wokhuni oluqinileyo.
Umnyango oqinileyo opeyintiweyo ngomthi:
Umnyango we-lacquer wenziwe ngomthi wendalo ovela ehlathini. Emva kokumisa, iqhutywa ngeenkqubo ezahlukeneyo. Umphezulu uxelisa i-PVC yemithi yefilimu, imigca yendalo kwaye intle.
Umthi oqinileyo wokubhaka umnyango opeyintiweyo unokujongana neengxaki zokuzinza kocango oluqinileyo lomthi, olufana nokuqhekeka kunye nokuqhekeka, kwaye kunesiphumo sokugquma kwesandi kunye nobushushu.
Umnyango wokuqala wenkuni:
Umnyango wokuqala wokhuni ubhekisa kumnyango wokhuni owenziwe ngomthi okhethiweyo wendalo njengezinto ezingavuthiyo. Into ephambili kukuba izinto zecandelo ngalinye legqabi lomnyango ziyafana, kwaye ngaphakathi nangaphandle kuyahambelana. I-Pine, i-Chinese fir, i-oki, njl njl ngexabiso eliphantsi. Umgangatho ophezulu wenkuni yokuqala unamaplanga e-walnut, i-cherry wood sabiri, iinkuni ezibomvu, kunye ne-rosewood njalo njalo. Kodwa uzinzo lwayo alulunganga, kuba uxinzelelo lwelog enye lukhulu kunolo lwe-glulam, ke kulula ukuyigqwetha, ukuqhekeka kunye nezinye iingxaki, kwaye ixabiso lomnyango wokhuni oluhlaza liyabiza.